Xukuumada Soomaaliya oo bilaabeysa barnaamij cusub oo ku aadan dhismaha maamulada deegaanada – idalenews.com
Xukuumada Soomaaliya ayaa sheegtay inay qaadi doonto barnaamij cusub oo ku saabsan dhismaha maamulada deegaanada, kaasoo taladeeda ku imaanaya dadka deegaanka iyo waxgaradka.
Wasiirka Arrimaha gudaha iyo Amniga Qaranka C/kariin Xuseen Guuleed ayaa sheegay inay dhamaaday in waraaqadihii ka soo bixi jiray Xafiiska Wasaarada Arrimaha gudaha ee lagu magacaabi jiray Maamulada degmooyinka.
“Xukuumada waxay qaadatay barnaamij ku saabsan dhismihii maamulada degmooyinka, halkii Xamar laga soo magacaabi jiray hada waqtigeeda waa dhamaaday wasaarada arrimaha gudaha warqad laga soo magacaabi jiray”ayuu yiri Mr Guuleed.
C/kariin Guuleed ayaa sheegay in dadka deegaanka ay ka tashtaan, isla markaana qofkii ay soo xushaan Wasaarada u saxiixeyso, maamulkana uu u noqon lahaa mid ka yimaada deegaanka sida uu yiri.
“Dowladda waa federaal, dastuurka ayaa dhigaya, waxaa soo xulaneysaan dadka berri idinka idin maamulaya, anagana waa idin saxiixeynaa, talada Afgooye Xamar kama imaaneyso, xuquuqdiina laguma tumanayo”ayuu yiri Wasiirka Arrimaha gudaha.
Shalay ayay aheyd markii Wafdi uu hogaaminayay Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ay booqasho ku tageen degmada Afgooye, iyadoo dadka deegaanka ay u gudbiyeen cabashooyin la xiriira habka maamul u dhisida oo ay sheegeen in maamul walba xamar looga soo magacaabo.
Wasiirka Gaashaandhigga”Waxaan Fursad U Siindoona Dhalinyarada Ka Baxday Jaamacadaha In Ay Ka Mid Noqdaan Ciidamada XDS”